Keele University - Fianarana in United Kingdom. EducationBro Magazine
City : teny
Créé : 1949
Aza adino ny miresaka momba Keele University
Misoratra anarana ao amin'ny Keele University
Keele izahay University ary izahay hafa. Créé mihoatra noho 60 taona maro lasa izay ny finoana fa hihaona ny fitakian'ny vaovao karazana fiaraha-monina, toe-karena sy izao tontolo izao, ny fitsipika mafonja io ankehitriny mihoatra noho ny hatramin'izay.
FIRENENA eo amin'ny 600 hektara ny ambanivohitra ao am-pon'ny ny UK, maro ny mpianatra, ary maro ny mpiasa velona, ary koa ny fianarana sy ny asa eto. Tena be toeram-pianarana, fa ny kely sy ny fiaraha-monina cosmopolitan. Tsy miasa amin'ny sehatra olombelona, manome ny olona ny toerana mba hieritreritra sy be atao foana, amin'ny midadasika nahay ny fikambanana, fiaraha-monina, asa atao an-tsitrapo sy ny fahafahana.
Misesy laharana isika amin'ny tena ambony ny mpianatra fahafaham-po fanadihadiana. Ny antony dia satria izany mihoatra noho ny maitso sy mahafinaritra, izany toerana ny fikarohana sy ny fianarana tsara koa. Na izany Fahasalamana, Humanities sy ny Siansa Sosialy, na siansa momba ny zavaboary, na inona na inona amin'ny faritra misy anao ny fianarana, dia hamonjy ny tsy manam-paharoa sy ny iraisam-pirenena fianarana traikefa. Tsy mampianatra amin'ny tarika madinika, manome ny iray-to-iray ny miditra ao amin'ny anjerimanontolo, ary sarobidy ny hatsaran'ny ny fampianarantsika raha tena toy ny fikarohana.
Ny halehiben fandaharan'asa sy ny fototra taona foana sarotra natao manokana, malefaka ary malalaka kokoa ny ara hahatonga ny fahalalana. Ny interdisciplinary sy multidisciplinary fomba tsy underpin mahafinaritra fotsiny fanabeazana izao tontolo izao, fa ny hery nitarika ny fikarohana. Rehetra izay midika ihany koa no hamonjy fiantraikany lehibe sy sarobidy avy amin'ny fikarohana sy fampianarana, eran-ary koa ny an-toerana.
Tena Tsy mahagaga ny mpianatra sy ny Alumni dia tahaka ny olona tahaka ny University mihitsy: miandalana ary tanteraka, mazava tsara mikasika ny hoe iza izy ireo ary inona no tiany ho, ampy fitaovana mba hitsena ny sasany amin'ireo olana goavana izao tontolo izao amin'izao fotoana izao fanomezana, fa ny soa ny fiaraha-monina sy ny toeram-piasana.
Keele any Avaratra Staffordshire nisasaka eo Manchester sy Birmingham. Ny University dia amin'ny havoana izay ahatazanana ny tanàna ny Newcastle-ambanin'ny-Lyme (roa kilaometatra avy Keele) amin'ny Stoke-on-Trent (ary ny lehibe faritra fiantsenana Hanley) fotsiny ny roa kilaometatra bebe kokoa.
Misy nandroso fiainana mpianatra manodidina ny toeram-pianarana, ary isan-karazany ny café-trano fisotroana, trano fisakafoanana sy ny Pubs tany Newcastle sy langilangy in Hanley.
Theatre tia dia hankafy ny New Vic tany Newcastle sy ny Regent in Hanley, raha ny sarimihetsika farany dia aseho amin'ny multi-efijery fijerena sarimihetsika ao Newcastle. Ny loha-hevitra lehibe indrindra UK zaridaina, Alton Towers, manodidina 45 minitra avy ao amin'ny University. Ny tsara tarehy ihany Peak District 20 kilaometatra miala Keele. Jereo Peak District- zavatra mba hijery sy hanao Raha mila fanazavana fanampiny.
Keele ny foibe toerana dia midika dia mora ny mahazo na aiza na aiza eto amin'ny firenena, amin'ny M6 sy ny lalamby rohy akaiky akaiky. Manchester sy Birmingham dia samy ny fiara adiny iray izy, raha mbola London dia 90 minitra lamasinina.
Keele manolotra isan-karazany ny antokony nametraka anao amin'ny lalana ho an'ny hoavy. Tsara isika manome fanohanana sy ny fotodrafitrasa ho an'ny mpianatra, na pianarana ary fiaraha-monina.
Ny antokony manolotra:
Mandrisika ny fampianarana sy ny fianarana sy fahaiza-manao ho an'ny asa ho avy.
High quality fampianarana isan-karazany manerana ny akademika sy arak'asa lohahevitra.
Fahafahana manambatra ny zavatra mahaliana sy hampivelatra ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ny miavaka Dual Honours fiakarana – maherin'ny 500 foto-kevitra ny tsikombakomba misy.
Koa izahay manolotra matihanina tokan-tena Honours diplaoma in Fitsaboana, fahasalamana, Lalàna sy ny raharaham-barotra lohahevitra.
Amin'ny tsara tarehy, namana toeram-pianarana, Keele manolotra mpianatra tena manokana traikefa:
Excellent fialam-boly ao amin'ny Mpianatra’ Union isaky ny alina amin'ny herinandro.
Nahazo diplaoma hiala Keele tamin'ny sasany ny tsara indrindra sy ny asa akademika tahan'ny fahombiazana ao amin'ny UK
Izany ny Keele fahasamihafana.
Faculty ny Humanities sy Social Science
Mianatra Fiteny Unit
Media, Serasera sy ny Kolontsaina
Music and Music Teknolojia
politika, Fifandraisana iraisam-pirenena sy ny filozofia
Social Science sy Public Policy
Fahasalamana sy Fanarenana
Nursing sy Midwifery
Faculty ny siansa momba ny zavaboary
Simia sy fanafody Simia
Computing sy ny Matematika
jeografia, Haibolantany sy ny tontolo iainana
Fizika sy ny Astrophysics
Ara-batana sy Geographical Siansa
Keele University dia naorina teo an 1949 tahaka ny University College Avaratra Staffordshire, amin'ny fandraisana an-tanana ny A D Lindsay, dia mpampianatra filozofia sy Tompon'ny Balliol College, Oxford. Lindsay dia mafy mpisolovava ny asa-kilasy fanabeazana olon-dehibe, izay efa nanolo-kevitra voalohany ny “ny oniversite ny olona” ao amin'ny lahateny iray ho an'ny Avaratra Staffordshire mpiasa’ Fanabeazana Association in 1925.
On 13 March 1946, Lindsay nanoratra ho Sir Walter Moberly, seza ao amin'ny University Grants Komitin'ny (UGC), kevitra ny fametrahana ny oniversite “ao amin'ny andalana vaovao”. Nanorina fomba fanao ho an'ny kolejy vaovao mba ho nanomboka tsy misy mari-pahaizana-hanomezako hery, fa naka ivelany ambaratonga ao amin'ny University of London. Crucially, Lindsay Te “manala ny London ivelany ambaratonga”, fa tsy mamorona ny oniversite miaraka amin'ny fahefana avy any amin'ny voalohany ka hametraka ny fandaharam-pianarana manokana, angamba miasa eo ambany fiahiana ny iray orina oniversite. Lindsay nanoratra koa ny lefitry-Chancelier ny Oxford, tentatively nangataka fotsiny fiahiana toy izany.
An exploratory komity dia naorina ny Stoke-on-Trent City Filan-kevitry ny, tarihan'i Lindsay ary tohanan'ny mpanolotsain'ny tanàna Thomas Horwood, Solontenan'ny Etruria sy ny mpitarika ny vondrona Asa tamin'ny Filan-kevitry ny Tanàna. Nahazoany famatsiam-bola avy amin'ny bahoaka UGC tamin'ny Janoary 1948, ny Komity Keele nahazo Hall, marevaka an-trano eo amin'ny manodidina an'i Newcastle-ambanin'ny-Lyme, avy ny tompony, Ralph Sneyd. The Hall, drazana fonenana ny Sneyd family, teo aloha no requisitioned ny Ady ho an'ny miaramila Biraon'ny fampiasana tamin'ny Ady Lehibe II, ary namatsy ny ampahany lehibe amin'ny Sneyd toetrany sy ny maro efa voarafitra mialoha rafitra najoro ny tafika, fa ny isan'ny £ 31.000.
Ny voalohany nahazo diplaoma ny toerana misy anao i George Eason efa nianatra tao Birmingham Matematika University nahazo ny BSc in 1951. Nahazo ny MSC in 1952 avy Keele.
Ny voalohany nianatra nahazo diplaoma tao Keele tanteraka i Margaret Boulds in 1954, nahazo diplaoma tamin'ny Filozofia sy Anglisy. mitombo hatrany, ny oniversite kolejy dia nasandratry ny oniversite toerana amin'ny 1962, ny fandraisana ny vaovao sata Royal tamin'ny Janoary tamin'io taona, ary nanangana ny anaran'ny amin'ny Anjerimanontolon'i Keele. Izany mbola ofisialy anarana, na dia Keele University ankehitriny ny fampiasana isan'andro. Izany no fantatra ho toy ny fitaratra Plate anjerimanontolo.
In 1968, ny Royal Commission amin'ny Medical Education (1965-68) namoaka ny “Todd Report”, izay nandinika ny mety ho mpitsabo sekoly rehefa naorina tao Keele. Nisy nihevitra fa Avaratra Staffordshire ho tsara toerana, manana lehibe iray ao an-toerana sy ny mponina maro be hopitaly. Tsy noheverina fa farafahakeliny fihinanana ny 150 isan-taona ireo mpianatra ho ilaina ny hanao ny fitsaboana ary hianatra sekoly ara-toekarena azo iainana. Na izany aza, ny oniversite dia tamin'izany andro izany loatra kely mba hanohanana ny fitsaboana sekoly io habe. Na izany aza, in 1978, Keele Department of Medicine, nahazo diplaoma teny nisokatra. Izany nitarika ny fikarohana ara-pitsaboana sy ny fanabeazana ara-pahasalamana, nahazo diplaoma teny, fa tsy nampianatra undergraduate mpitsabo mpianatra. In 2002, ny sasany avy any Manchester mpianatra Medical School Nanomboka nampianarina tao Keele. Farany Keele ny dokotera ny sekoly nisokatra in 2007.
In 1994, ny Oswestry sy Avaratra Staffordshire Sekoly Physiotherapy (ONSSP), izay efa mitokana andrim-panjakana mifototra amin'ny ny Robert Jones sy Agnes Hunt Orthopaedic Hospital in Oswestry, Shropshire, natambatra amin'ny Keele University, lasa Keele ny Department of Physiotherapy Fianarana, ary namindra toerana an'ireo avy tany Oswestry ho any amin'ny fonenan'ny mpianatra Keele University. Tamin'ny volana Aogositra 1995, Keele University natambatra tamin'ny Staffordshire Avaratra College ny Nursing sy Midwifery, fananganana ny Sekoly vaovao ny Nursing sy Midwifery.
In 1998 ary 1999 nisy adihevitra ny sasany ny fanapahan-kevitra amin'ny anjerimanontolo manam-pahefana mba hivarotra ny Turner Collection, ny famoriam-bola ny matematika sarobidy boky vita pirinty, anisan'izany ny sasany izay anisan'ny - ary efa mafy annotated ny - Isaac Newton, mba bola lehibe ho fanatsarana ny oniversite trano famakiam-boky. Manam-pahefana ambony oniversite fahefana ny fivarotana ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny tsy miankina mpividy, tsy misy antoka fa hitoetra ho rava, na ao anatin'ny UK. Na dia ara-dalàna azo atao, ny fivarotana dia tian'ny olona teo amin'ny fiaraha-monina akademika sy ny adihevitra nahatonga ny ela dia ratsy gazety mikasika ny milaza fa ny £ 1m fivarotana Price loatra sy ambany fa ny famoriam-bola dia antoka ho rava ny.
Noho ny fihenan'ny lazany sy ny famatsiam-bola, alemà departemanta nakatona tamin'ny Desambra 2004, na ny oniversite nihazona ny fizika mari-pahaizana na dia eo aza ny foto-kevitra toy izany koa miatrika olana.
In 2009, ny oniversite dia nahazo ny Taonan'ny Queen loka ho an'ny Fampianarana Ambony sy hitondra fanampiana ao, ho an'ny “asa ny asan'ny mpisava lalana niaraka tamin'ny NHS tamin'ny fiandohan'ny-tsehatra sy ny fikarakarana voalohany indrindra ao amin'ny fitsaboana ny fanaintainana sy ny vanin-taolana mitaiza, mampifandray fikarohana ny fanaterana ny marary amin'ny alalan'ny tambajotra GP sy ny vondrona mpampiasa”.
In 2012 Keele nampiditra fototra vaovao roa taona, ny iraisam-pirenena sy ny taona fanorenana haingana fototra iraisam-pirenena ny taona, izay hanampy ny efa misy tolotra, tahaka ny humanities, siansa, siansa ara-tsosialy, fahasalamana, ankapobeny fototra taona sy fanorenana taona ho an'ny olona izay jamba.
Fanitarana bebe kokoa ny toerana nisy ny oniversite avy 2015 Antenaina mba hitondra fampiasam-bola tsy miankina amin'ny alalan'ny fametrahana ny siansa foibe. Izany no hitondra ny asa an'arivony ho Staffordshire ary koa ny oniversite. Ny fananganana foibe manan-tsaina angovo mikendry ny hanorina angovo maharitra loharano sy mampirisika ny teknolojia maitso.
Ianao ve mila miresaka momba Keele University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Keele University ao amin'ny Map
Photos: Keele University ofisialy Facebook
Keele University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Keele University.